Allgedo.com » 2013 » February » 02
Home » Archive Daily February 2nd, 2013
Golaha Wasiirada Soomaaliya oo Isku Raacay Hindisaha Maamul Usameynta Gobolada iyo Degmooyinka Dalka
Shir ay maanta isugu yimaadeen Golaha Wasiiradda oo uu shir gudoominayay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “ Saacid” ayaa looga hadlay sharciga maamul-u-samaynta Gobollada, Sarifka lacagaha qaalaad iyo warbixin kooban oo laga dhageystay Wasiirka Horumarinta iyo Adeegga Bulshada Drs Maryam Qaasim. Ugu horreyntii Goluhu wuxuu warbixin ka dhageystay...
Madaxweynaha Puntland oo ka hadley Dilkii Suldaan Muuse Faarax oo Maanta Rag hubaysan ay ku toogteen Magaalada Boosaaso.
Madaxweynaha Puntland ayaa maanta saxaafadda kala hadley dilka Suldaan Muuse Faarax Muuse (Onkod), madaxweynaha ayaa sheegey in warkaasi maanta soo gaarey gacan ku dhiigalayaashiina aan weli la soo qaban. Cabdiraxaamn Faroole ayaa ka tacsiyeeyey dilka suldaanka loo gsytey, waxaana uu tilmaamey in dilkiisu qayb ka yahay dad birimageydo ah oo badan oo lagu diley Puntland, waxaana uu ku eedeeyey dilkaas...
Maraykanka oo Sheegay inuu sii Wadyo Duqeymaha Diyaaradaha uu ka Geyso Wadamo ay ka mid tahay Soomaaliya.
Isagoo wareysi siinayay AFP xoghayaha difaaca Mareykanka Leon Panetta,ayaa wuxuu sheegay in Mareykanka uu doonayo inuu sii wado dagaalka uu kula jira Kooxaha Al-Qaa’ida gaar ahaan kooxaha xariirka la leh ee ka dagaalama dalka Soomaaliya iyo Yemen. Xoghayaha Difaaca Mareykanka Mr Panetta ayaa hoosta ka xariiqay inay wadaan qorshe ay ku cusbooneysiinayaan Diyaaradaha dagaalka ee aan cidi kaxeynin...
Q/Midoobay oo ka fiirsanaysa in Soomaaliya laga Qaado Xayiraada Hubka ee Saaran.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ka fikiraya qaadidda xayiraadda hubka ee Soomaaliya saaran tan iyo 1992-kii, si dowladda cusub ay awood ugu yeelato inay dhisto ciidamo awood leh oo dalka oo dhan la wareega. Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay,Bankimuun ayaa shaaca ka qaaday in dadaal dheer la gilinayo sidii Soomaaliya ay u hanan lahayd guud ahaan amaanka dalka,si taasi loo helana waxuu sheegay...
Indhaha Caalamka oo Maanta ku sii jeeda Cadaalada Soomaaliya.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka bilaamay Dacwadda dad gaaraya 5 qof kuwaas oo u xirnaa “Kufsi ka dhacay xeryahaha dadka soo barakacay” sida ay ku doodeen. Dacwaddan ayaa noqotey mid soo jiidatey saxaafada Caalamka, Ururada xuquuqda aadanaha, iyo qaar kamid ah dalalka Soomaaliya saaxibka la ah. Dulmar Dacwadda la xiriirka Kufsiga Waxaa warbaahinta Caalamka qaarkeed ku soo baxay sida ALJAZEERA...
Ciidamada Dowlada oo Howlagalo Amaan sugid ka Wada Gobolka Bay.
Ciidamada Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ee ku sugan Gobolka Bay ayaa maalmihii u danbeeyey halkaas ka wadey hawlgallo ka dhan ah kooxda al-Shabaab. Hawlgalladan ayaa ka danbeeyey kadib markii sida la sheegey Ciidamo taabacsan al-Shabaab ay jidka u galaan dadka rakaabka ah ayna kala degaan dadka ay rabaan isla markaana qaarkood ay dileeen. Guddoomiyaha degmada Berdaale ayaa Warbaahinta u sheegey...
Q/Midoobay oo ka deyrisey Xaalada Nafaqo darida ee Soomaaliya.
Warbixin ay soo saartay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO ayey ku sheegtay in qiyaastii 215 kun oo caruur ah oo ay da’doodu ka yar tahay shan sano ay heyso xaalad nafaqo-daro, kuwaasoo 45 kun oo ka tirsan ay xaaladoodu liidato. FAO waxay sheegtay in saddex meelood oo labo ay caruurtaasi ku nool yihiin gobollada koonfureed ee ay dagaalladu ka aafeeyeen, waxaa la sheegay...
Dowlada Kenya oo sheegtay Duqeymo ay ka geysatey Gobolka Gedo in ay ku dishey Dagaal yahano ka tirsan Alshabaab.
geysteen,islamarkaana ay ku sheegeen in duqeyntaasi ay ku dileen askar ka tirsan Al-shabaab ee fadhigooda uu yahay koonfurta Soomaaliya. Afhayeenka ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya Colonel Cyrus Oguna,oo ka hadlay duqeynta diyaaradaha dagaalka Kenya ay ka geysteen Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Koonfureed,ayaa wuxuu shaaciyay in Duqeynta khasaaro ay ku gaarsiiyeen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab...
Feysal Cali Waraabe oo sheegay Deegaanada Somaliland in ay ku sugan yihiin Rag ka tirsan Alshabaab.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka Ucid ee Maamulka Soomaaliland Faysal Cali Waraabe ayaa wuxuu sheegay in deegaano ka tirsan maamulka Soomaaliland ay ku sugan yihiin rag ka tirsan Al-Shabaab. Faysal Cali Waraabe ayaa wuxuu sheegay in qaar kamid shacabka Soomaaliland ay sheegeen in dad Kismaayo lagu arki jiray oo ka tirsan Al-Shabaab iminka ay ku sugan yihiin deeganada maamulka Soomaaliland. Madaxweynaha...